Kuvhurwa kweMecidiyeköy Mahmutbey Metro Line Yakatumirwa | RayHaber | raillynews
mushaTURKEYDunhu reMarmara34 IstanbulKuvhurwa kweMecidiyeköy Mahmutbey Metro Line Yakatumirwa
14 / 05 / 2020 34 Istanbul, Railway, PHOTOS, GENERAL, KENTİÇİ Rail Systems, musoro wenyaya, Dunhu reMarmara, Metro, TURKEY
imamoglu mecidiyekoy mahmutbey akaita bvunzo pametro line
PresidentBB Mutungamiri Ekrem İmamoğlu vakaita ongororo paMecidiyeköy-Mahmutbey Metro Line's Nurtepe Station. Vachitaura kuti varonga kuisa mutsara muna Chivabvu 19, asi chirongwa chetachiona hachibvumiri izvi, İmamoğlu akati, "Chibvumirano chakasvitswa nekambani yekune imwe nyika yekusainira hurongwa hwetsetse. Nehurombo, vashandi veiyi kambani, avo vanoita basa pano, vanonyanya kutarisirwa kubva kuSpanish Center uye kubva kune imwe nzvimbo muSpain. Nehurombo, nemaitiro eCovid, vakatadza kuita sevhisi kubva munaKurume 3 ”. Vachitaura kuti kune dzimwe nzvimbo dzekuvaka umo maitiro akaita zvinhu izvi, İmamoğlu akati, "Tine hurombo nekutadza uku, asi haisi bhizinesi risingaperi." Tichakurumidza kuzvigadzirisa. ”
Ekrem İmamoğlu, Meya weIstanbul Metropolitan Municipality (IMM), akaongorora panzvimbo yeNurtepe Station yeMecidiyeköy-Mahmutbey Metro Line, iri kuvakwa. Vagari vemo vakagamuchira ruzivo rwekuti Imamoglu anouya kuchiteshi vakaita rudo rwekuratidzira kune IMM Mutungamiriri kubva kumaleconies. Vachipindura nekufara kwevagari vemo, Imamoglu akaburukira pasi pasireti. Pano, İmamoğlu akapiwa ruzivo rwehunyanzvi nezvebasa pane iye mutsara naPelin Alpkökin, Musoro weIMM Rail Systems department. Alpkökin, mutsara wako, Beşiktaş uye Kabataş Akagovana neruzivo iro mabasa ekuchera matongo paziteshi akange achienderera neİmamoğlu.
"PAKUTI ZVESE ZVENYAYA '
Mushure mekuongorora mharidzo yeAlpkökin, İmamoğlu akati: "Kune kambani yekune dzimwe nyika iri pano. Iyo yekusaina system yakabvumiranwa neiyo firm. Nehurombo, vashandi veiyi kambani, avo vanoita basa pano, vanonyanya kutarisirwa kubva kuSpanish Center uye kubva kune imwe nzvimbo muSpain. Nehurombo, nemaitiro eCovid, vakatadza kupa sevhisi iyi kubva munaKurume 3. Vaifanira kusiya nzvimbo ino yebasa vodzokera kunyika yavo. Kwemwedzi inosvika 2,5, hatigone kuwana sevhisi iyi. Kune vamwe vashandi vemuno vanoita basa iri, sekureva kwaita contractor kontrakta kwatiri. Asi chokwadi ichi chidzidzo chisina kukwana. Sezvauri kuona ikozvino, nhepfenyuro dzakapera chose. Mumamiriro ezvinhu akadaro, iko kupfupisa chete kuri kuratidza. Chikamu chehunyanzvi chakakosha kwazvo mune zvakadaro zvinhu. Mune mamwe mazwi, hazvigoneke kuvhura pano pasina izvo bvunzo uye maitiro. Isu takamumirira izvozvi; kutaurirana kunoenderera. Ose ari maviri kondirakiti uye isu tinoenderera mberi nekutaurirana kuunza nekukurumidza sezvinobvira. Tiri mukushandira kukuru. Sezvo pasina mhinduro yakajeka, anenge mazuva makumi masere, mazuva makumi mapfumbamwe ekuedzwa anofanirwa kupedzerwa pano maererano nekusaina. Isu tiri mukuedza kukuru kugadzirisa uye kuunza vashandi kuno kubva kuSpain. Tichangotanga, isu tinoda kugashira siginari yekushandira mutsara wedu uye kupa mutsetse uyu kuvagari veIstanbul nekukurumidza. Kana zvisina kudaro isu tingave tichivhura munaMay, takave neichiitiko chinosiririsa. Tine nzvimbo dzekuvaka uye zvimwe zvirongwa uko Covid akasangana nematambudziko akadaro. Tine urombo nezve hitch iyi. Harisi bhizinesi risingapindike; tichakurumidza kuzvigadzirisa. ”
KUKOSHESA KWEMAHARA KUSVIRWA NEBALCONES
Mushure mekuziviswa, İmamoğlu, uyo akaburukira papuratifomu nenhume iripo, akaperekedzwa naMevlüt Öztekin, meya weKağıthane. Achipedzisa bvunzo pachiteshi, İmamoğlu akasara kuNurtepe ainekuremekedzwa kwevagari vakaungana pamakonde avo neshoko rekuti "Tinokuda, President, ndinokutenda."
Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Line, Warehouse - Kuchengeta Nzvimbo uye Warehouse Connection Line…
Tender ziviso: Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro mutsara nyoro uye yekuchengetedza nzvimbo yekuchengetedza, imba yekuchengetedza…
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Line Kuvaka Basa Tender Yakatumirwa kusvika 16 Kubvumbi
Tender Announcement: Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Rail Transport Yeveruzhinji Yekutakura System…
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Line, Warehouse-Kugadzirisa Nzvimbo uye Warehouse Connection Line Project…
Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Line Warehouse - Kugadzirisa Nzvimbo uye Warehouse Connection Line…
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Line Warehouse - Kugadzirisa Nzvimbo uye Warehouse Connection Line…
Tender yeMecidiyeköy-Mahmutbey Metro Line project inofanira kuitwa munaSeptember
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro line ichawedzera kukosha kumapurojekiti
Mecidiyeköy - Mahmutbey metro line ichaiswa mubasa pa 2017
Mecidiyeköy Mahmutbey Metro Line inopera
Mahmutbey-Mecidiyeköy metro mvumo yemvumo yakasayirwa
Kushaya mvura kunokonzerwa nekuvakwa kweMecidiyeköy-Mahmutbey metro line
Selluka Certificate achapiwa kuti Mabhizimisi kuti zvinoenderana hwemuviri zvinodiwa mu Izmir
14 nguva yekushaya mvura muIstanbul sechikamu cheMecidiyeköy-Mahmutbey metro line construction
Kabataş Mecidiyeköy Mahmutbey Metro Line ichavhurwa riini?
Mecidiyekoy Mahmutbey Metro Nzira uye Nguva
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro mutsetse wekutakura mota yakakwidzwa